Wararka Maanta: Jimco, July 20, 2012-Xiisado u dhexeeya ciidamada DKMG ah, kuwa AMISOM iyo Al-shabaab oo ka taagan Gobolka Gedo
Goobjoogayaal ku sugna degmada Buurdhuubo ayaa sheegaya in xoogagga Al-shabaab ee ku sugan degmadaas ay billaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaasoo ay ku doonayaan inay ku difaacdaan degmada.
Xaaladda degmada Baardheere oo maalmihii lasoo dhaafay ay hareeraheeda ka dhaceen iskahorimaadyo culus oo u dhexeeya ciidamada DKMG ah oo gacan ka helaya kuwa Kenya iyo Al-shabaab ayaa deggen, inkastoo ay weli ciidamadu isku horfadhiyaan goobihii ay ku dagaalameen.
Inkastoo Xarakada Al-shabaab aysan ka hadlin dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee socda ayaa haddana wararka la helayo waxay sheegayaan in ciidamada DKMG ah iyo kuwa Kenya ay xireen jid isku xira degmooyinka Baardheere iyo Buur-dhuubo kaasoo ay marin ahaan u isticmaali jireen xoogagga Al-shabaab.
Dhanka kale, wararka laga helayo degmada Buurhabaka ayaa waxay sheegayaan in xoogaggii Al-shabaab ee ku sugnaa degmadaas ay isaga baxeen, kaddib markii ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladdu u dhaqaaqeen dhinaca degmadaas oo ay markii horeba ku dhawaayeen.
Ciidamada Kenya oo ka mid noqday AMISOM iyo kuwa Itoobiya oo labadaba gacan ku siinaya dowladda KMG ah sidii ay u qabsan lahayd gobollada iyo deegaannada ay ka taliso Xarakada Al-shabaab ee ku yaalla Koonfurta Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa weli waxay ka talisaa dhul ballaaran, inkastoo uu culeys milateri oo xooggan saaran yahay hadda, waxaana dhawaan saraakiisha Jubbooyinka ee Al-shabaab ay sheegeen inay difaacan doonaan degmada Kismaayo oo la aamisan yahay inay ka helaan dhaqaalaha ay ku dagaalamaan.
7/20/2012 4:37 AM EST